विप्लवको नेपालबन्दको प्रभाव देशभर: कहाँ कहाँ के भयो ? (अपडेट सहित) – Daunne News
विप्लवको नेपालबन्दको प्रभाव देशभर: कहाँ कहाँ के भयो ? (अपडेट सहित)
गैडाकोटमा फेरि भेटियो अर्को शंकास्पद वस्तु
पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोट नगरपालिकाको जयश्री पुल नजिकै रहेको बम डिस्फोड गरेको केही समय नवित्दै नजिकै अर्को शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ ।
पुलदेखि केही दक्षिणतर्फ शंकास्पद वस्तु भेटिएको गैडाकोट प्रहरीले जनाएको छ । उक्त शंकास्पद वस्तु डिस्फोज गर्नका लागि नेपाली सेनाको टोली त्यसतर्फ लागेको जनाइएको छ ।
विप्लव नेकपाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दका क्रममा नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडकखण्डको राँझा चोकमा राखिएको केट्ली बम नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको छ ।
बिहानै चोकमा बम राखिएको खबर पाएलगत्तै घटनास्थलमा पुगेको नेपाली सेनाको बम डिष्पोजल टोलीले बम निष्क्रिय पारेको हो । बम राखेको सूचना पाउने बित्तिकै घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले नेपाली सेनालाई जानकारी गराएको बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा सतर्कता बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नवलपरासी । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताहरुले कावासोतीको मुख्य चोकमा बिहीबार विहान बम विस्फोट गराएका छन् ।
विहान साढे ११ बजेतिर विस्फोट भएको हो । सडक सुनसान रहेकोले विस्फोटका कारण कुनै मानवीय क्षति भएको छैन । विस्फोट भएको क्षेत्र नजिकै डिभिजन वन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पनि छ भने नजिकै तरकारी बजार पनि छ ।
घटना स्थललाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सुरक्षाकर्मीले घेरेर राखेका छन् । अन्त पनि बम राखेको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । बम कस्तो र कुन प्रकारको थियो खुल्न सकेको छैन ।
विप्लवको बन्दले पोखरा प्रभावित, दुई ठाउँका शंकास्पद वस्तु निस्क्रिय
बिहान पोखराको सभागृह चोक र भण्डारढीकमा शंकास्पद बस्तु फेला परेको जानकारी दिँदै कास्की प्रहरीका प्रवक्ता रवीन्द्रमान गुरुङले दुवै ठाउँका शंकास्पद वस्तु निस्क्रिय गरिएको बताए ।
सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवलको कालीकानगरमा बिहीबार बिहान फेला परेको शंकास्पद वस्तु बम भएको पुष्टि भएको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको क्रममा बाल्टीमा कालो प्लाटिकले बेरेर राखिएको शंकास्पद वस्तु फेला परेको थियो । बुटवल—भैरहवा सडक खण्डको कालीकानगरमा स्पिड ब्रेकरमा राखिएको उक्त शंकास्पद वस्तु ‘इन्प्रोभाइस एक्सप्लोसिभ डिभाइस’ (बम) भएको डिस्पोजका क्रममा पत्ता लागेको हो ।
नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले विष्फोट गर्दा निकै ठूलो आवाज आएकाले उक्त वस्तु शक्तिशाली बम भएको पुष्टि भएको प्रहरी निरीक्षक हेमबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
प्रहरीले बेलैमा सेनाको टोलीबाट डिस्पोज गराएकाले ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको प्रहरी निरीक्षक केसीले बताए ।
बन्दका बेला यस्ता शंकास्पद वस्तु अन्यत्र पनि भेटिनसक्ने भएकाले त्यस्ता वस्तु नछुन र सुरक्षा निकायलाई खबर गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
बन्दको असर देशभर
अदालत अगाडि शंकास्पद वस्तु फेला, बम भएको आशंका
कैलालीको बडैपुरमा बसमा आगजनी गरिएको छ । आगजनीबाट बस जलेर पूर्णरूपमा क्षति भएको छ ।
बसमा कसले आगजनी गरेको हो भनेर खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार बुधबार राति चार बजेतिर पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बडैपुरको जंगलमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आइरहेको म १ ख ४४१ नम्बरको बसबाट यात्रुलाई ओरालेर आगजनी गरिएको छ ।
हालै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आह्वान गरेको बन्दको पूर्बसन्ध्यामा बसमा आगजनी गरिएको हो ।
यस्तै, भीमदत्त राजमार्ग अन्तरगत पर्ने कैलालीको गोदावरी सडक खण्डमा बन्दका दिन किन गाडी चलाएको भन्दै गाडी रोक्न खोज्ने तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको कैलाली प्रहरी प्रमुख एसपी आभूषण तिम्सिनाले बताए ।
कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको एसपी तिम्सिनाले बताए पनि कैलालीमा लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन चलेका छैनन् ।
गोरखाका दुई स्थानमा भेटिएका शंकास्पद वस्तु सेनाद्वारा डिस्पोज
गोरखाका दुई स्थानमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको छ ।
गोरखा नगरपालिका–६, भीआईपी टोल र वडा नम्बर १० को बाह्रकिलोमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय पारेको हो ।
गोरखाका प्रहरी प्रमुख एसपी भोला रावलले भने २ स्थानमा भेटिएका शंकास्पद वस्तु पोखराबाट आएको नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरेको जानकारी दिए ।
शंकास्पद वस्तु फेला परेसँगै प्रहरीले जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारेको छ ।
गैडाकोटमा राखिएको बम नक्कली
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बन्दका क्रममा नवलपुरको गैडाकोटको जयश्री पुलमा राखेको बम नक्कली भएको पाइएको छ ।
रातो प्लाष्टिकको ब्याग भित्र खतरा संकेत दिएर राखिएको शंकास्पद वस्तुलाई सेनाले विहीबार विहान डिस्फोज गरेको हो ।
पश्चिम नवलपरासीमा दुई वटा ट्रकमा आगजनी
विप्लवको बन्दको राति पश्चिम नवलपरासीमा दुई वटा ट्रकमा आगजनी भएको छ । सरावल गाउँपालिका १ तुलसीपुर चोकमा रोकिराखेको दुई वटा ट्रकमा आगजनी भएको हो ।
राति १ बजेको सयममा ना ५ ख ७८४१ र ना ४ ख ६८२५ नम्बरको ट्रकमा अज्ञात समूहले आगो लगाउँदा दुबै ट्रकको पछिल्लो दुई चक्का जलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
दुबै ट्रकमा लागेको आगो समयमै निभाएर ट्रकहरुलाई प्रर्ण क्षति हुनबाट जोगाइएको प्रहरीदले जनाएको छ ।
नवलपरासीमा बन्दको प्रभाव
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना कार्यकर्ता रिहाई, आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा लगायतका मागहरु राख्दै गरेको बन्दको प्रभाव विहीबार नवलपरासीमा पनि परेको छ । विहान केही झिटफुट सवारी साधन चले पनि अहिले सडक सुनसाधन छ ।
विद्यालय, कलेज लगायतका शैक्षिक संस्थाहरु खुल्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी बजार तथा पसलहरु प्नि छिटफुट मात्रमा मात्र खुलेको छ ।
बागलुङको जनजीवन प्रभावित, यातायात शैक्षिक संस्था ठप्प
नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको नेपाल बन्दले बिहिबार बिहानैदेखि बागलुङको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
बागलुङमा शैक्षिक संस्था, यातायात, कलकारखाना, उद्योग धन्दा र बजार ठप्प रहेका छन् । लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधान नचल्दा जिल्ला भित्रने र जिल्ला बाहिर जाने यात्रु अलपत्र परेका छन् ।
साना सवारी साधान भने छिटफुट रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । सरकारले निरन्तर दमन गरेको, संकटकालको जस्तो व्यवहार गरेको, पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको विरोधमा नेपाल बन्द गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनाएको छ ।
दुर्गाबहादुर रोकालाई गोली प्रहार, पार्टी केन्द्रिय सदस्य बन्धु चन्द्र लगायत देशव्यापी रुपमा दजनौ नेता, कार्यकर्ता, र शुभचिन्तकलाई गिरप्तार गर्ने, झुटटा मुद्दा लगाउने यातना दिने सकटकाल झै विभिन्न गाउँमा अप्रेशन चलाएको विरोधमा बन्द आह्वन गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बागलुङका इन्चार्ज विकिरणले जारी गरेको विज्ञाप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले विप्लव माओवादीलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाए पछि पहिलो पटक बन्द आह्वन गरेको हो । बागलुङमा कुनै अप्रिय घटना नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विप्लबकाे बन्दकाे कारण यातायात बन्द, सुदूरपश्चिमको जनजीवन प्रभावित
बाजुरा जिल्लाको बुढीनन्दा नगरपालिका मा पर्ने डाब बजारमा संकास्पत बस्तु भेटीएको छ । नेकपा विप्लवले आज नेपाल बन्दको घोषणा गरेकाले त्रास देखाउँनका लागि उक्त बस्तु सडकमा राखेको हुँन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक उद्धप सिंह भाटले बताए। ‘कपडामा बेरेको बम जस्तो देखीने सामान सडकको बिचमा राखेको भन्ने खबर छ। म आफै घटना स्थलमा जाँदै छु। बाटोमा पुगेको छु। जिल्लाका अरु ठाउँमा भने अहिले सम्म केही भेटीएको छैन।’ प्रहरी नायब उपरीक्षक भाटले बताए।
आज बिहानै सदरमुकाम बाट छुट्ने छोटो दुरीका र लामो दुरीका यातायात संचालन भएका छैनन्। बन्दका कारण सुदूरपश्चिमको जनजीवन बिहानैदेखी प्रभावित भएको छ। बन्दका कारण नौ वटै जिल्लाबाट बिहान छुट्ने यातायातका कुनैपनि साधन नछुटेको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ।
प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख केदार रजौलेले बिहान यातायातका साधन नछुटेपनि रात्रि बसहरुलाई स्कर्टिङ गरेर गन्तव्य तर्फ पठाइरहेको जानकारी दिए। यस्तै बिहान सञचालन हुने अधिकांश क्याम्पस पनि नचलेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपनि नेपाल बन्दको घोषणा गरिएको हो। बन्दलाई लक्षित गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको प्रहरीले जनाएको छ।
सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल बन्दको घोषणा गरिएको हो। बन्दलाई लक्षित गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको प्रहरीले जनाएको छ।
पाल्पामा पनि बन्दको प्रभाव
पाल्पामा पनि पुरै ठप्प छ । बजारमा पसल खुलेका छैनन । कहि कतै सवारी साधन चलेका छैनन । प्रहरीका अनुसार सिद्दार्थ राजमार्गको तिनाउ गाउँपालिका २ भुतखोलामा संकास्पद बस्तु भेटिए पनि बम भने । शिक्षण संस्था खुलेका छैनन । ८ कक्षाको जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुन सकेन । प्रेस एम्बुलेन्स र पानी साथै सुरक्षाको सवारी चलेको छ ।
मकवानपुरमा ट्रकमाथि आगजनी, शंकास्पद वस्तु निस्क्रिय
मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–४, नयाँगाउँमा गएराति एक ट्रकमाथि आगजनी गरिएको छ ।
अज्ञात समूहले काठमाडौंबाट हेटौंडातर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ७४११ नम्बरको हेभी इक्वीपमेन्ट बोक्ने ट्रेलर गाडी गएराति १२ बजे आगजनी गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङले जनाएको छ । मास्क लगाएको एक समूहले गुडिरहेको गाडी रोकेर चालक तथा सहचालकलाई बसबाट ओराली पेट्रोल छर्केर आगजनी गरेको ट्रकका चालकले बताए ।
ट्रकमा आगलागी भएपछि थाहा नगरपालिकाको दमकलले नियन्त्रण गरेको थियो । आगलागीबाट ट्रकको अगाडिको भाग पूरै जलेको छ । घटनामा विप्लव समूहको संलग्नता हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मेवारी लिएको छ ।
यसैबीच, हेटौंडाको औद्योगिक क्षेत्रनजिक भेटिएको शंकास्पद वस्तु डिस्पोज गरिएको छ । शंकास्पद वस्तु भेटिएको सूचना पाएलगत्तै पुगेको नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले डेटोनेटरको सहायताले शंकास्पद वस्तु निस्क्रिय पारेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
बन्दले प्रदेश ५ का १२ जिल्ला प्रभावित
सरकारले प्रतिवन्ध घोषणा गरेको नेत्रविक्रम चन्द विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव प्रदेश ५ का सबै जिल्लामा परेको छ ।
कर्णालीपछि प्रदेश ५ विप्लवको गतिविधि भएको क्षेत्र हो । विहीबार प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाका लागि बस छुट्ने बुटवलको लुम्बिनी बस टर्मिनलबाट कुनै सवारी साधन चलेका छैनन् ।
प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लाहरुलाई अन्यको तुलनामा विप्लव समूहको बढी प्रभाव भएका क्षेत्रका रुपमा लिने गरिन्छ ।
विभिन्न बस समिति, जीप समितिहरुका टिकट काउन्टर बन्द गरिएका छन् । सार्वजनिक यातायातका साधन नचल्दा प्रदेशभरिको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।